April | 2011 | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
ဒီပဲယင်းလုပ်ကြံမှုကြီးအပြီး ဆွေးနွေးပွဲကတိတွေလိုက်နာဖို့ စစ်အစိုးရဘက်က ပျက်ကွက်ခဲ့ဟု
ဧပြီ ၂၉၊ ၂၀၁၁ – အာရ်အက်ဖ်အေရေဒီယုို ကောက်နုတ်ချက်
၂၀၀၃ မေလ(၃၀)ရက်နေ့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဒီပဲယင်းအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ အဲဒီအရေးအခင်း နောက်ပိုင်း၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ် မေလ အမျုိုးသားညီလာခံ ပြန်မစမီကာလအတွင်း စစ်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေနဲ့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ရရှိခဲ့တဲ့ သဘောတူညီချက်တွေကို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က RFA ကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဒီပဲယင်းအဖြစ်အပျက်အပြီး စစ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်တွေအကြား လျှို့ဝှက် ဆွေးနွေးပွဲတွေ အကြိမ်တော်တော်များများ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိခိုက်နစ်နာသူတွေကို ထိုက်သင့်တဲ့ နစ်နာကြေးပေးရေး အပါအဝင် အချက်(၄)ချက်ကို အာဏာပိုင်တွေက သဘောတူညီခဲ့ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
“ ဒီပဲယင်း ကိစ္စအပြီးမှာ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံစကားပြော သဘောတူညီမှုယူခဲ့တဲ့ အချက်တွေက – Read the rest of this entry »
Posted by oothandar on April 29, 2011 in Aung San Suu Kyi, Interview
သပျစ်သီးလေးတွေ ချိုပါတယ် …
သောတရှင်တို့ရေ နှစ်သစ်ဦးမှာ ဆုထူးလဲချွေ၊ ကာင်းမှုတွေလုပ်၊ ဘိုးတော်သိကြားပုရပိုဒ်မှာ မရှုပ် ရအောင်ဆောင် ရွက်ပြီးခဲ့ပြီမို့ ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့သို့တွေဆီ ချီတက်ရပေဦးမယ်ပေါ့ရှင်။ မာအေးတို့ အမိနိုင်ငံက ၀န်ထမ်းတော်များလဲ သင်္ကြန်နားရက် တာကထွက်ရတော့မှာကိုး။ သူတို့သင်္ကြန်နှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်တွေ ဆယ်ရက်တိုးလာပါလား …. တို့များတုန်းက ဘယ်ကြားဖူးလို့လဲ။ သင်္ကြန်အကြပ် နှစ်ရက်ထပ်ရင်ကို ဘဲ ပျော်လှပြီ။ ငယ်သေးရင် အလုပ်တောင် ပြန်ဝင်ဖို့ကောင်းပါရဲ့။ Read the rest of this entry »
Posted by oothandar on April 29, 2011 in Mar Mar Aye
Aung Tha Nge’s poem – 22
လွဲမှား တိမ်တိုက်များ …
လွဲမှားမှုတွေရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ ရှာခဲ့ရ …
နင်ရော ငါရော …
လွှင့်ချင်ရာကို လွှင့်ရင်း … က …
လွင့်ချင်ရာကို လွင့်ခဲ့ရတဲ့ … ကြိုးပြတ် စွန် နှစ်ကောင် …
ဒဏ်ရာ တထောင်ကို ထမ်းပိုးထားတဲ့ စာမျက်နှာတခုစီသာ …
မရီမောနိုင်သော စိုထိုင်းဆတွေ အကြီးကြီးနဲ့ …
ငါတို့ရင်မှာ သိပ်သည်းနေတော့တယ် … Read the rest of this entry »
Posted by oothandar on April 29, 2011 in Aung Tha Nge, poem
Maung Yit – Unity in Diversity
Posted by oothandar on April 29, 2011 in Cartoon Box, Maung Yit
Myo Myo May – Today isanew day
ကိုနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့ ကျမတို့ ရန်ကုန်ကို ပြောင်းခဲ့ကြတယ်။ ရန်ကုန်မှာ ဗွီဒီယိုဖြန့်ချီရေးလုပ်ငန်း လုပ်ပါတယ်။ နယ်တွေဆင်းပြီး ခွေဖြန့်ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ သမီးဦးလေးကို မွေးခဲ့ပြီး၊ ဒီအချိန်ထိ ကျမတို့ မိသားစုလေးဟာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ မိသားစုလေးပေါ့။ ကျမဘဝမှာ ကျမသိပ်ချစ်တဲ့ကိုရယ်၊ သမီးလေးရယ် ဘာမှ မလိုအပ်တော့လောက်အောင်ပဲ ပြီးပြည့်စုံသလို အရမ်းကို စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်ခဲ့ ပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာ ၅ နှစ်နေထိုင်ပြီး ကို့ဇာတိဖြစ်တဲ့ မကွေးမြို့မှာပဲ အပြီးတိုင်အခြေချမယ်ဆိုပြီး မကွေးကို ပြောင်းရွေ့ ခဲ့တယ်။ မကွေးမှာပဲ သားငယ်လေးကို မွေးဖွားခဲ့တယ်။ ကလေးဆက်သွားတဲ့အတွက် သမီးနဲ့သားလေးဟာ ၁-နှစ်ပဲကွာလိုက်တယ်။ ကိုဟာ ပန်းတိမ်လုပ်ငန်းကို ပြန်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျမရယ် ကိုရယ်၊ သမီးလေးရယ်၊ သားလေးရယ်၊ မိသားစု ၄ ယောက်ဟာ ဘာမှပြဿနာမရှိ၊ အေးချမ်းစွာပဲ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေနဲ့ နေထိုင် လာခဲ့ ကြတုန်း ကျမရဲ့ကို ခဏခဏ ဖျားလာပါတယ်။ Read the rest of this entry »
Posted by oothandar on April 29, 2011 in Contemporary Experience
Translated by May Ka on “Twilight over Burma by Inge Sargent ” # 8
မြူတိမ်ဝေဝေ … တောင်ခိုးဝေးဝေး – ၈
ဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၁၁
နေ့စဉ်ပင် သုစန္ဒာအဖို့ အံ့သြစရာတွေ ချည်းတွေ့နေရလေသည်။ ခံစားချက်အသစ်များကို ရင်ထဲသိမ်းဆည်းထားပြီး အံ့သြဖွယ် ညနေခင်းကျတော့မှ ၀ရံတာမှာထွက်ထိုင်ရင်း စ၀်ကိုပြောပြလေသည်။ သူတို့နှစ်ယောက် ယခုတိုင် အင်္ဂလိပ်လိုပင်ပြောကြသည်။ သူတို့စတွေ့ကြကတည်းက အင်္ဂလိပ်လိုပြောသည်။ နောက်ပိုင်းကျတော့မှ တိုးတက်လာပြီး သုစန္ဒာသည်တရားဝင်စကားဖြစ်သော မြန်မာစကား တိုင်းယိုင်စကားတို့ကိုပါပြောလာနိုင်လေသည်။
စ၀်က သုစန္ဒာကို တိုင်းယိုင်စကား၏ အဓိက အသံ ၅မျိုးကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖြင့် လေ့ကျင့် သင်ပေးခဲ့သည့်အတွက် စ၀်ကို သူမ ကျေးဇူးတင်ရသည်။ စကားလုံး၏အဓိပ္ပါယ်ပေါ်မူတည်ပြီး အသံအနိမ့်အမြင့် ကိုရွေးပြောရသည်။ အသက်ကြီးသောသူ နှင့် လေးလေးစားစားပြောရသောသူတို့ကိုပြောသည့်အခါ သူမ အသံ အနိမ့်အမြင့်ကို သတိထားပြောရသည်။
အသံနိမ့်မြင့်ကိုမှားပြောမိလျှင် စော်ကားသလို ဖြစ်နေလေသည်။ မား ဟူသော စကားလုံးသည် လာပါ ဟုအဓိပ္ပါယ်ရပြီး မာ ဟူသောစကားလုံးသည် ခွေး ဟု အဓိပ္ပါယ်ရလေရာ အသံ အနိမ့်အမြင့်ပြောင်းလိုက်တာနှင့် ဒုက္ခများနိုင်လေသည်။
သူမသည် သူ့အိမ်က လူတွေဆွေမျိုးတွေနှင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်ပြောဆိုပြီးနောက်မှပင် သူမသည် သူတို့ အပေါ်အသံထွက်မှားပြီး အကြိမ်ပေါင်း မည်မျှများ စော်ကားနေမိပါလိမ့် ဟုတွေးမိရတော့သည်။ သူတို့သည် သူမ၏ စိတ်ပျက်စရာကောင်းသော အမှားများကို အလွန်ကြင်နာစွာလက်ခံပေးပြီး သူမ၏ အလေးထားမှုကို ခံယူကြလေသည်။ Read the rest of this entry »
Posted by oothandar on April 29, 2011 in May Ka, Serial Translation
Local Burmese Journalists raised and donate charity to support political prisoners through NLD
ပြည်တွင်း သတင်းသမားများလည်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအတွက် ငွေလှူ
ဧပြီ ၂၈၊ ၂၀၁၁
ပြည်တွင်းသတင်းသမားများက နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသည့် အကျဉ်းသားများအတွက် ကူညီထောက်ပံ့ငွေ ကျပ် ၂ သိန်းကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ တဆင့်လှူဒါန်းခဲ့သည်။
ပြည်တွင်းသတင်းသမားများ အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအား စိတ်ဓါတ်ရေးအရ ထောက်ခံအားပေးခြင်း၊ ခံစားနေရသည့် ဒုက္ခများအား ဝေမျှစေလိုသည့် ဆန္ဒဖြင့် မိမိတို့ တတ်နိုင်သရွေ့ ထည့်ဝင်ကြပြီး ပေးလှူခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟု သွားရောက်လှူဒါန်းသည့်အထဲ ပါဝင်သူ ကိုမြင့်ကျော်က ပြောသည်။ Read the rest of this entry »
Posted by oothandar on April 29, 2011 in Local News Headlines